Fampanarahan-dalàna – Fiara 12 nogiazina tao anatin’ny herinandro - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Fampanarahan-dalàna – Fiara 12 nogiazina tao anatin’ny herinandro
Fiaraha-miasan’ny polisy monisipaly sy ny polisim-pirenena. Nanomboka ny alakamisy 02 janoary teo ny asa fampanarahan-dalàna amin’ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra, ka fiara 12 no efa nogiazina hatramin’ny omaly. « Nahitana taksibe, fiara mitatitra tany mena hanotofana tsy nahazoana alalana, fiaran’olon-tsotra ireo », hoy ny kapiteny Razafimahefa Jocelyn, lefitry ny talen’ny kabinetra eo anivon’ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo. Ny fanokafana varavarana eny am-pandehanana,izay mety hitera-doza ho an’ny mpandeha sy ny fijanonana amin’ny toerana tsy natokana ho amin’izany kosa no anisan’ny antony nanagiazana ireo taksibe. Ny fanasana fiara eny amin’ny arabe, toerana voararan’ny lalàna hanaovana izany indray ho an’ireo fiaran’olon-tsotra.
Fantatra fa ao anatin’ny fanaovana fanentanana ho amin’ny fampanarahan-dalàna hatrany ny tompon’andraikitra, ho an’ireo tranga azo leferina. Notsipihin’ny kapiteny Razafimahefa Jocelyn kosa fa mitarika ho amin’ny fanagiazana toy izao ny trangana tsy fanarahan-dalàna tratra ambodiomby, izay mety hitohy ho amin’ny fakàna ny taratasy fahazoan-dalana hamily.
Efa manomboka mahazo vahana eto amintsika ny aretin’ny faharovitan’ny tranon-jaza. Tranga manodidina ny 2 000 isan-taona no hita ary vehivavy telo amin’ireo arivo bevohoka no voan’ny aretina, araka ny antontan’isa avy amin’ny Tahirim-bolan’ny Firenena Mikambana misahana ny mponina (Fnuap). « Vehivavy 563 ihany koa no hita voan’ny aretina mamany lava nandritra ny herinandron’ny fahasalaman’ny reny sy
MPITATITRA NITOKONA Nitokona ary nibahan-dalana ireo mpitatitra amin’ny lalam-pirenena RN5, omaly. Vokatry ny faharatsian-dalana izay miteraka fahasimban’ny fiarakodia no nambaran’izy ireo fa anton’izany. Tsy nisy fiara niasa mihitsy mampitohy an’i Soanierana Ivongo sy Fenerive Est, tamin’io omaly io. Nilaza ny mbola hanohy ny fitokonana mandritra ny telo andro ireo mpitatitra ireo mba ho antso fanairana Nanomboka omaly – Hifanotofan’ireo tolotra vaovao samihafa ny FIM 2013(0)
Ambohipihaonan’ny fandraharahana amin’ny ankapobeny ny tahala ho an’ny fampirantiana Forello eny Tanjombato. Nisokatra, omaly ary haharitra hatramin’ny alahady izao, ny andiany faha-8 amin’ny Foara Iraisam-pirenen’i Madagasikara na ny FIM. Hifanotofan’ireo tolotra vaovao avy amin’ireo mpandray anjara ny hetsika. Anisan’ireo vokatra vaovao ao anatin’ny FIM ny zezika voajanahary miampy izay singa ilaina novokarin’ny Guanomad. Misy karazany
Afa-pahasahiranana indray ny mponina. Isan’ny faritra be mponina sy mpifanerasera etsy amin’ny fokontany Anosibe Mandrangombato. Miavosa araka izany koa ny loto eny an-toerana ka miteraka fahasahiranana ho an’ny vahoaka. Mponina manodidina ny 300 ao an-toerana ihany no nokaramain’ny avy amin’ny Fiadidiana ny tetezamita hanadio amin’ny alalan’ny asa tana-maro. « Efa nisy ny fitarainan’ny filoham-pokontany taminay ary
Hetraketraky ny fiainana – Mpivady sy ny mpanampiny novonoin’ny dahalo tamin’ ny fomba feno habibiana(0)
TAO AMINA TSENA IRAY AMORON’NY LALAM-PIRENENA FAHAFITO, AO AN-TAMPON-TANÀNAN’ILAKAKA, NO NITRANGAN’ITY FAMONOANA OLONA AMIN’NY FOMBA FENO HABIBIANA ITY. TAMIN’NY 8 ORA SY SASANY ALINA, MAIZIN-KITROKA NY TANÀNA IRAY MANONTOLO, NANDRIAKA NY RA TAO AMINA TSENA IRAY TAO AN-TOERANA. MPIVADY ROA, RAMAROLAHY SAMUEL SY RAZAFINDRAMAVO HANTAMALALA, NIARAKA TAMIN’NY MPANAMPINY IRAY NO MATY TSY TRA-DRANO NOVONOIN’NY DAHALO
Fifamoivoizana, Mpanoratra Rijakely, 12.01.2013, 00:10	FIARAHAMONINA
Vu d’ailleurs	Lahatsoratra vaovao	Hisintona ny firotsahany Rajoelina raha miala koa ireo kandidà 12 hafa Tanjombato – Lehilahy maty nitsoraka tampoka avy eny ambony tetezana
« Airtel jeunes talent » – Hifantina ankizy 16 ho any Nizeria ny Airtel sy ny Génération